Kuthetha ukuthini xa iRashiya i-Beats Cover?
Ukubetha sisihloko esithile okanye umxholo othi intatheli iquka. Uninzi lwezentatheli ezisebenza kwiibhokhwe zeendaba eziphrintiweyo nakwi-intanethi. Umnyathelisi unokubamba intsimbi ethile ngexesha elide leminyaka.
Ezinye zeentsimbi eziphambili ziquka, kwicandelo leendaba, iipols , iinkundla , urhulumente weedolophu kunye nebhodi yesikolo . Icandelo lezobugcisa kunye nokuzonwabisa lingahlukana ukuya kwiinqwelo ezibandakanya ukuhanjiswa kwee-movie, iTV , ubugcisa bokuqhuba nokunye njalo.
Abaphengululi bezemidlalo , akumangalisi ukuba banikwe iinqwelo ezinjengebhola, ibhola yebhoksi, i-baseball kunye njalo. Imibutho yeendaba ezikhulu ngokwaneleyo ukuba zibe neefreeaus zangaphandle, ezifana ne -Associated Press , ziya kuba neentatheli ezikummandla ophezulu wehlabathi njengeLondon, eMoscow naseBeijing.
Kodwa kumaphepha amakhulu kunye nabasebenzi abaninzi, iinqwelo zingaphaya ngakumbi. Ngokomzekelo, icandelo leendaba zoshishino linokuhlulwa kwiinqwelo ezihlukeneyo kumashishini athile afana nokuvelisa, ubuchwepheshe obuphezulu nokunye. Amaziko eendaba angakwazi ukuvelisa iicandelo zawo zesayensi inokubetha ababhali beendaba eziza kubandakanya ezo nkalo njenge-astronomy kunye ne-biotechnology.
Kukho iinzuzo ezininzi zokuba intatheli. Okokuqala, izibetho zivumela abathwali beendaba ukuba baveze izifundo abazithandayo. Ukuba uthanda ama-movie, amathuba okuba uyakuvuyela ithuba lokuba umgxeka wefilimu okanye ugubungele imboni ye-movie.
Ukuba ungumntu wezopolitiko, akukho nto iya kuhambelana nani kunokugqithisa ezopolitiko kumgangatho wendawo, urhulumente okanye wesizwe.
Ukumboza intsimbi kukuvumela ukuba wakhe ubuchule bakho ngesihloko. Naliphi na intatheli elungileyo angenza ibali lolwaphulo-mthetho okanye adibanise inkundla yesikhalazo , kodwa owaziwayo umbethi-ntatheli uyazi i-ins and outs ngendlela abaqalayo abayi kuyenza.
Kwakhona, ukuchitha ixesha kwi-beat kukukwenza ukuba uqokelele iqoqo elungileyo lemithombo kuloo nto, ukuze ufumane amabali amahle uze uwafumane ngokukhawuleza.
Ngamafutshane, intatheli echithe ixesha elide elalibethele inkunzi ethile ingabhala malunga nayo negunya lokuba omnye umntu akakwazi ukufana.
Umgca wolu qhe lwazi kukuba ukubetha ngezinye iinkhathi kunokubethwa emva kwexesha. Abaphengululi abaninzi, emva kokuchitha iminyaka emininzi bembethe intsimbi, baya kufuna ukuguqulwa kweendawo kunye nemingeni emitsha, ngoko ke abahleli bavame ukutshintshela abathwali beendaba ukuze bahlale besanda kubanjwa.
Ukubikwa kwengxelo kukwahlukana kwamaphephandaba - nakwezinye iiwebhusayithi zeendaba-ezivela kwezinye iindidi zendaba, njengeendaba zeTV zendawo. Amaphephancwadi, abasebenza bhetele kunokuba basasaze iindaba zentengiso, batyathele ababhali beendaba ukuba baveze ngokugqithiseleyo nangokubanzi kunokuba zidlalwa kwiindaba zeTV.
I-Biography kaMax Weber
Ukukhula koqoqosho lwe-US yaseMpumalanga
Kutheni i-0% yokungabikho kwengqesho ayikho into efanelekileyo
Ileta yeSincomo Samphando
Funda ngeNjongo kunye neSebenzi yeZithuba eziMnandi kwi-Art?
UTito - uMbusi waseRoma uTito weFlavian Dynasty
Ngaba Ngabazali Abahle BamaDinosaurs?
Uluhlu olupheleleyo lwezona ziLwimi eziLungileyo zeLatin Latin Singers